यस कारण अर्पणको पछि–पछि ऋचाFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
यस कारण अर्पणको पछि–पछि ऋचा
फिल्मी फण्डा । जहाँ अर्पण त्यहा ऋचा अर्थात अर्पण थापा भएको फिल्ममा नायिका ऋचा प्राय छुट्दैनन । पछिल्लो समय यस्तै भएको छ । आधा लभ देखी पछिका प्राय सबै फिल्ममा यी जोडी देखा पर्न थालेका छन् । कतै यी दुईको अफेयर त छैनन् अर्थात प्रेममा मा त छैन भने जिज्ञासा प्रेसमिटमा सञ्चारकर्मीले राख्ने गर्छ । तर यी जोडी त्यसको वारेमा केही बोल्न मान्दैनन् र अर्को प्रशन गर्न अनुरोध गर्छन् ।
फेरि एक पटक यी जोडी पुरन थापाले निर्माण तथा निर्देशन गर्न लागिएको फिल्म फेरि फेरिमा सँगै देखिदैछन् । अर्पण र ऋचा स्वयमले यसको वारेमा कुनै कार्यक्रममा केही प्रतिक्रिया नदिए पछि हामीले फिल्ममा निर्माता प्रश्न गर्यौं । यी दुईको जोडीको फिल्म व्यवासयिक रुपमा सबै फ्लप छन् र पनि यी दुईकै जोडी किन ? निर्माता प्रश्नको उत्तर गर्दै आवश्यकता लिएको बताए ।
सबै कुरा खोल्न नचाहेता पनि फिल्म फेरि फेरि निर्माण पक्षका स्रोतका अनुसार फिल्ममा अर्पण थापालाई अफर गरिएको थियो तर अर्पण ऋचालाई सिफरिस थरिएको हो । ऋचालाई फिल्ममा लिने शर्तमा मात्र अर्पण काम गर्ने भएपछि बाध्यताले दुबैलाई लिनुपरेको बुझिएको छ ।
खासमा कुरा के हो भने अर्पण थापालाई आफर गरिएको फिल्ममा अर्पणले ऋचालाई दबाबका साथ नै सिफारिस गर्ने गरिन्छ ।
यति मात्र हैन ऋचा शर्मालाई अफर गरिएको फिल्ममा समेत ऋचाले अर्पण थापालाई सिफारिस गर्ने गरेको बुझिएको छ । बाहिर रेष्टुरेन्ट देखी रिसोर्ट सम्म यी जोडीलाई भेट्ने गरिन्छ । माता बसुन्धारा मुभिजको ब्यानरमा निरज थापा निर्माता रहने फिल्म फेरि फेरिमा ऋचा र अर्पणको अलवा लय संग्रौला, ओम प्रतिक लगायतको मूख्य भुमिका रहेको छ । फिल्ममा कथा र नर्दिेशन पुरन थापाको रहेको छ ।